Dhageyso Diyaaradaha Mareykanka Oo Duqeeyay Saldhiga Galmudug. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Diyaaradaha Mareykanka Oo Duqeeyay Saldhiga Galmudug.
Diyaaradaha dagaalka dowlada Nasaarada Mareykanka ayaa habeenkii xalay tiro Gantaala ah ku dhuftay saldhig maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Galmudug ay ka sameysteen dhanka bari ee magaalada Gaalkacyo oo ah xarunta gobalka Mudug.
Duqeynta ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay inka badan 15 askari oo ka tirsan maamulka Ashahaado la dirirka Galmudug’iyadoona tiro inaasi ka badan lagu dhaawacay duqeynta.
Sarkaal ka tirsan maamulka Galmudug ugu magacaaban magaalada Gaalkacyo oo warbaahinta kula hadlay saldhigii diyaaradaha Mareykanka duqeeyeen ayaa qiray iney jirto duqeyntaasi.
Sarkaalka waxa uu carabaabay in xog qaldan la siiyay diyaaradaha Mareykanka ee duqeeyay saldhiga’waxa uu intaasi ku daray in gaadiid dagaal ay ku gubteen duqeynta ayna jiraan askar fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyntaasi.
Duqeynta ka hor waxaa nawaaxiga saldhiga ku wada dagaalamay maleeshiyaat ka kala tirsan maamulada gaala raacyada Galmudug iyo Puntland’iyadoona wax yar ka dib iska hor’imaadka labada maleeshiyo diyaaradaha Mareykanka ay duqeeyeen saldhiga maamulka Galmudug.
Halkan Ka Dhageyso Duqeynta Gaalkacyo.